Munaasabad lagu maamuusayay 3 Sano guuradii ka soo wareegatay Aas aaska Xisbiga Dadka oo lagu qabtay Muqdisho | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Featured Wararka Munaasabad lagu maamuusayay 3 Sano guuradii ka soo wareegatay Aas aaska Xisbiga...
Munaasabad lagu maamuusayay 3 Sano guuradii ka soo wareegatay Aas aaska Xisbiga Dadka oo lagu qabtay Muqdisho
Munaasabadan oo lagu maamuusayay markii dhidhibada loo aasay Xisbiga Dadka oo ka mid ah Axsaabta Siyaasadeed ee ka jira Dalka ayaa maanta ka dhacday Magaalada Muqdisho.
Munsaabada oo si weyn looga soo shaqeeyay ayaa waxaa ka soo qeyb galay Xisbiyo Siyasadeed oo ka jira Dalka, Mas’uuliyiin, Waxgarad, Aqoonyahano, Siyaasiyiin iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada waxaana looga hadlay waxqabadka Xisbiga Dadka oo mid ah Axsaabta Siyaasadeed ee ka jira Dalka, Hogaamiyahoodana uu ka mid ahaa 26-kii Musharax ee Xilka Madaxtinomo isu soo taagay Xiligii KMG laga gudbayay.
Afhayeenka Xisbiga Dadka oo ka mid ahaa Mas’uuliyiintii ka hadlay Munaasabadda lagu maamuusayay 3 Sano guuradii ka soo wareegatay markii la aas aasay Xisbiga Dadka Aadan Cabdulle ayaa sheegay in Xisbiga Dadka aan laga leheyn Umadda Soomaaliyeed marka laga reebo kuwa Dambiyada ka galay Dalka waxuuna tilmaamay in Madaxda iyo Hogaanka XISBIGA DADKA ay ka xun yihiin Duqeymo Diyaaradaha Dagaal ee Wadamada Shisheeya ay ka fuliyaan gudaha Dalka.
“Xibiga Dadka Cida laga leeyahay ma jirto marka laga reebo kuwa Dambiga ka galay Dalk iyo Dadka Soomaaliyeed, waxaana ka xun-nahay Diyaarahada Dagaal ee Duqeeya qeybo ka tirsan Dalka Soomaaliya kuwaasi oo laga leeyahay Wadamada Shisheeya” sidaasi waxaa yiri Afhayeenka Xisbiga Dadka Aadan Cabdulle.
Afhayeenka Xisbiga Dadka Aadan Cabdulle oo hadalkiisa sii wata ayaa waxuu sheegay in Hogaanka Xisbiga Dadka ay ka xun-yihiin xadgudubka iyo tacadiga loo geystay Dadka ku nool Dalka Kenya Isagoona tilmaamay in Xisbiga Dadka aan marnaba u dulqaadan doonin dhibaatooyinkaasi Dadka loogu geysanayo Kenya looga baahan yahay Dowladda Soomaaliya in Dowladda Kenya ay kula xisaabtanto Tacadiga iyo dhibaatooyinka lagu hayo Umadda Soomaaliyeed.
Hogaamiyeyaasha Jamhuuriya iyo Xisbiga Sahan Qaran oo ka mid ahaa Xubnihii lagu casuumay ka qeyb galka Munaasabadda lagu maamuusayay 3 Sano guuradii ka soo wareegatay markii la aas aasay Xisbiga Dadka oo iyaguna Musaanada ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay isbadal, Xaalada Dalkana ay tahay mid aad u xun.
Guddoomiye ku xigeenka Xisbiga Dadka, C.fataax Cabdulle oo isna hadal ka jeediyay Munaasabada ayaa waxuu sheegay in uu ka xun-yahay Dagaal Beeleedyo ka socdo Gobolka Sh.Hoose waxuuna tilmaamay in loo baahan yahay Shaqsiyaadka ka shaqeenaya hirunta Dagaaladaasi iskana horkeenaya Beelaha Walaala ah lala xisaabtamo.
“Dagaalka ka socda Gobolka Sh.Hoose gaar ahaan Marka waxaa wada Kooxo damacsan in Isbaaro ay dhigtaan Gobolka islamarkaana aan lala hadlin, Tusaale, Anigoo C.Fataax ahaan hadii aan Dilo Maxamed Bashiir Xaashi oo ka shaqeeya Idaacadda Shabelle ahna Reer Hilowle, Maxamed Bashiir Reerkiisa wey soo duulayaan waxeyna Dilayaan mid ka mid ah Reerkeyga marka Dagaalka Sh.Hoose-na waa sidaas” sidaasi ayii yiri Guddoomiye ku xigeenka Xisbiga Dadka.
Gudoomiyeyaasha Gobolka Banaadir iyo Gobolka Baay ee Xisbiga Dadka oo iyana Munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in Dalka Isbadal la gaarsiiyo, Hogaanka Xisbiga Dadkana ay ka go’antahay isbadalkaasi oo dhinacyo kala duwan taabanayo islamarkaana faa’ido u ah ay gaarsiiyaan Dalka.
Ugu dambeyn, Fanaaniin ka socotay Hobolada ONKOD, Kooxda Asluubta Soomaaliyeed ayaa heeso ka turjumaya wanaaga iyo Waxqabadka Xisbiga Dadka Munaasabadda ku soo bandhigay waxaana Hoolka ay ka socotay Munaasabadda Darbiyadiisa lagu xardhay Sawiro iyo Boorar Muujinayo Hogaanka Xisbiga Dadka Kartida uu leeyahay iyo Hogaaminta Dalka in uu hogaaminkaro hadii uu u guuleysto Madaxtinimada Dalka ee la filayo in doorasho ay ka dhacdo 2016 gudaha Wadanka Soomaaliya.
Previous articleXiisado kale oo laga soo sheegayo Shabeelaha Hoose
Next articleSHEEKH MAXAMED IDIRIS OO MOMBASA LAGU TOOGTAY